जाडोयाममा कसरी नुहाउने ? विचार गर्नुहोस् यी ५ कुरा « Lokpath
२०७७, ९ मङ्सिर मंगलवार १०:३५
प्रकाशित मिति : २०७७, ९ मङ्सिर मंगलवार १०:३५
काठमाडौं – जाडोमा कसरी नुहाउने ? यो सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । जाडोमा पानी नै छुन नपरे हुन्थ्यो भन्नेहरु पनि हुन्छन् । तर जाडोयाममा लगाईने कपडाले अझै धेरै पसिना निकालेको हुन्छ । त्यसैले दिनहुँ नसकेपनि एक दिन बिराएर नुहाउनु पर्छ । तर नियमित शारिरीक अभ्यास गर्नेहरुले कपाल ननुहाएतापनि शरीर भने सफा पानीले पखाल्नुपर्छ । जाडोमा तातो पानीले नुहाउँदा राम्रो हामीले धेरै सुनेका छौँ । तर के हामीले विचार गरेका छौँ कहिल्यै पनि कपाल तातो पानीले नुहाउनुुहँदैन ।
यदी तातोपानीले कपाल नुहाउने बानी परेको छ भने आजैबाट त्यो बानी हटाउनुहोस्- तातोपानीले कपाललाई निकै रुखो बनाउँछ। कपाल झर्ने टुक्रिने हुन्छ ।
अनुहार र शरीरको छालाको लागि पनि तातो पानी उपयुक्त मानिँदैन ।
त्यस्तै धेरै चिसो पानीले पनि छालालाई राम्रो गर्दैन । त्यसैले, नुहाउनको लागि मनतातो पानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
नुहाउन राखिएको पानीमा केहि मात्रामा नुन, तुलसीको पात राखौं । यस किसिमको मिश्रण भएको पानीले नुहाउँदा पनि रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ ।
अझ कतिपय मानिसको बानी हुन्छ- कपालमा जे भेट्यो त्यसैको प्रयोग गर्ने । भनाईको तात्पर्य के हो भने कपालको लागि उपयोगी हुने स्याम्पु प्रयोग गर्नुपर्छ ।
नुहाइसकेपछि शरीरको हरेक अंगमा तौलियाले राम्ररी पुछ्नुपर्दछ । अनि लोसनको प्रयो गरी मालिस गर्नुपर्छ । मसाजले रक्तसञ्चार पनि बढाउँछ । यस्तो क्रिया जाडोको लागि एकदमै उपयोगी कुरा हो । त्यसपछि सफा कपडा लगाएर केहिबेर शरीरको पछाडी भागमा घाम पारेर न्यानो बनाउन सकिन्छ । अनि घाम ताप्दै नङ सफा गरी काट्न सकिन्छ । कानको फोहोर निकाल्न सकिन्छ । तर दिउँसोको घाममा धेरैबेर बस्नु हुँदैन ।